Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Mpanondraka ara-barotra ao anaty lakozia
SKU: 2312000 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Fitaovana savoka an-dakozia, Toro-tanana Pull
Tena tsara bika, avo lenta. rehefa nahazo baiko iray aho dia manafatra faharoa ho an'ny tranon'ny rahalahiko koa.
Ny fametrahana dia mahitsy, ary mandeha araka ny tokony ho izy tsy misy famoahana. Betsaka ny tsindry rehefa mampiasa ny sintona. Mijanona ho azo antoka ao anaty fonosana izy io rehefa tsy ampiasaina.
Tonga lafatra ho an'ny milentika lalina.
Tena faly hatreto, toa tsara, araka ny hitanao. Ataovy tsara kokoa ny lakozia rehetra.
Mora apetraka, tsindry rano mahery vaika tokoa FA ny làlan-drano mihantona ao ambanin'ilay fantsakana dia tsy ampy, soa ihany aho fa afaka nampiasa ny tsipika avy amin'ny lafiny taloha.
WOWOW Pull Down Kitchen Faucet amin'ny Magnet ...